पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाह: नेपाली युवाहरुलाई सडकमा उत्रनु पर्ने बाध्यता किन? संदेश पढ्नुस -
लेखापढी १० असार २०७७, बुधबार १९:५८
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोनाबाट नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पिडा र जीवन गुमाएका तथा पिडाग्रस्त सबैप्रति श्रदा तथा समबेदना साथै संक्रमित सबिको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु भएको छ ।
अहिलेको संबेदनशील समयमा सबै नेपालीहरुले संयमता पुर्बक अघि बढ्नु पर्ने सन्देशमा भनिएको छ ।
शाह प्रश्न गर्नु भएको छ -“भ्रस्टाचार, लापरबाही, पक्षपात र भेदभावका कुरा किन दिनौ उठिरहन्छ ? बिबिध बिषयहरुलाई लिएर होनहार युवा, तमाम देशभक्त नागरिकहरु सडक संघर्षमा किन उत्रिरहनु पर्ने अबस्था सिर्जना भइरहन्छ ?”
पुर्ब राजा शाहले – बिबिध बाध्यताका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरु नेपालीहरु बीच ठुलो चुनौती र अवसर देखा परेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेश फर्किएका सबैको श्रम, सिप र समर्त्यको सदुपयोग गरि आफ्नै देश भित्र रोजगारीको ब्यबस्था मिलाउने पर्ने कुरामा समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
बदलिदो बिश्व परिवेश संगै हामीले हाम्रो कला, संस्कृति, धर्म, प्रकृति र पद्दति तर्फ अघि बढ्नु पर्ने साथै केहि दशक अघि सम्म आफ्नै स्वाभिमान, सामर्थ्यमा उभिएको देश फेरी शिर ठाडो पर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
आजको सन्देशमा शाहले बिबिध बिषय बारे उठेको अनेकौ प्रश्न राख्नु भएको छ । नेपाली देश भक्ति, स्वाधीन, स्वाभिमान माथि प्रश्न किन उठेको ? उनले भनेका छन्, हाम्रो देशभक्ति, स्वाधीन स्थिति एवं स्वाभिमानमाथि बारबारकिन प्रश्न, सन्देह र विवाद विग्रह उत्पन्न हुन्छ ? जनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य र जिविकाका विषयमा किन अलमल, असन्तोष र आक्रोश उठिरहन्छ ? रोगको महामारी, राष्ट्रियताको संकट, सीमा समस्या, राष्ट्रहित विरुद्धका सन्धि संझौता तथा हत्या, हिंसा र आत्महत्या जस्ता जल्दा बल्दा र दुखद विषय सन्दर्भमा पनि किन सधैंभरि विवाद आइरहन्छ ?
अहिलेको बिसम परिस्थितिलाई नियाल्दै असारमा पर्ने आफ्नो जन्मदिन नमनाउने निर्णय गर्नु भएको छ ।